नेपालमा पनि ओमिक्रोन सङ्क्रमण पुष्टि, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक, अब के होला ? - ramechhapkhabar.com
नेपालमा पनि ओमिक्रोन सङ्क्रमण पुष्टि, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठक, अब के होला ?
नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो।
दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका दुई जनाको नमुना संकलन गरेर जिन स्विकन्सिङ गर्दा ओमिक्रोन ​भेरियन्टको सङ्क्रमण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा सांसदले भने– राजदूत नियुक्ति समावेशी छैन
संघीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक सोमबार बसेको छ । प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइका लागि सोमबार समितिको बैठक बसेको हो ।
सो बैठकमा कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले उजुरीको सूचना निकाल्नुअघि नै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सुनुवाइ समितिले राजनीति नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिसमा गम्भीर रूपमा लिनु जरूरी छ । उजुरी लिनुभन्दा पहिले नै समावेशिताको प्रश्न उठ्नुपर्ने हो । तर, प्रक्रियाअघि बढिसकेपछि बोल्नु अलि उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
एमाले सांसद सुमनराज प्याकुरेलले राजदूत नियुक्तिमा समावेशीबारे प्रश्न उठाएका छन् । ‘राजदूत नियुक्ति समावेशी छैन । समावेशी नगरी गरिने राजदूत नियुक्तिमा समितिको ध्यान जानुपर्छ । समावेशिताको प्रश्न गम्भीर उठ्यो, के कसो सरकारसँग जानकारी मागौँ । अर्को बैठक बसेर सुनुवाइ अगाडि बढाउँ,’ उनले भने ।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले यो विषय अहिले थाती राखेर निर्णय प्रक्रियामा जाने र बाँकी कुरा कानुन बमोजिम हुनेछ बताए ।
‘राजदूत नियुक्तिमा कानुन बमोजिम मात्रै भनेको छ । अब आउनेमा समावेशी गर्ने हो । यसको जवाफ विगतका सरकारबाट आएन । यो विषय अहिले थाती राखेर निर्णय प्रक्रियामा जान्छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी कुरा कानुन बमोजिम हुनेछ । समावेशी विषयमा हामी आफैं चिन्तित छौं । धेरैपल्ट सरकारलाई निर्देशन गरिसक्यौँ । सरकारले के गर्ने हो थाहा छैन । यसको हामी सुनुवाइ गरेर निर्णय गरौं ।’